लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डुआला डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (सर्बिया) लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
सोनिका बायाँ खुट्टा खोच्याएर हिँड्‌छिन्‌। सानी छँदा उनलाई पोलियोमाइलेटिस अर्थात्‌ पोलियो लागेको थियो। यो अत्यन्तै सङ्‌क्रामक रोग हो र यसले स्नायुप्रणालीमा असर गर्छ। सोह्र वर्षको हुँदा उनकी मालिक्नीले यसो भनिन्‌: “ईश्‍वरले तिमीलाई यस्तो रोग दिएर सजाय दिनुभएको हो। तिमी अटेरी भएकीले र आमासित राम्रो व्यवहार नगरेकीले तिमीलाई पक्षाघात भएको हो।” यो कुराले उनको मन छियाछिया पारेको थियो। उनले यो बिर्सनै सकिनन्‌।
प्रगतिलाई मस्तिष्क क्यान्सर भएको पत्ता लागेपछि उनको बुबाले यसो भने: “तिमीले के गऱ्‍यौ? पक्कै कुनै नराम्रो काम गऱ्‍यौ होला। त्यसैले त यस्तो रोग लागेको हो। यो ईश्‍वरकै सजाय हो।” बुबाका कुरा सुनेर उनको मनै भाँचियो।
रोगबिमार ईश्‍वरले दिनुभएको सजाय हो भन्‍ने सोचाइ प्राचीनकालदेखि नै छ। बाइबलकालीन समयका देशहरूको रहनसहन र रीतिथिति (अङ्‌ग्रेजी) किताबअनुसार येसु ख्रिष्टको समयमा थुप्रै मानिसले “बिरामी परेको व्यक्‍ति वा उसको नातेदारले पाप गरेकोले रोगबिमार लागेको हो अनि त्यस पापको सजाय दिन ईश्‍वरले रोगले प्रहार गर्नुभएको हो” भनी विश्‍वास गर्थे। मध्यकालीन युगको चिकित्सा र महामारी (अङ्‌ग्रेजी) किताबले मध्ययुगका “केही मानिसहरूले ईश्‍वरले पापको सजाय दिन तिनीहरूमाथि महामारीले प्रहार गर्नुभएको हो भनी विश्‍वास गर्थे।” चौधौँ शताब्दीतिर युरोपमा लाखौँ मानिस महामारीले मरे। के यो दुष्टहरूमाथि ईश्‍वरको न्यायदण्ड थियो? अथवा चिकित्सा क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएझैँ ब्याक्टेरियाको सङ्‌क्रमणले फैलिएको महामारी मात्र थियो? कसै-कसैलाई यस्तो लाग्न सक्छ: ‘के ईश्‍वरले पापको सजाय दिन रोगले प्रहार गर्नुहुन्छ र?’ *
विचार गर्नुहोस्‌: यदि रोगबिमार र दुःखकष्ट ईश्‍वरले दिनुभएको सजाय हो भने उहाँको छोरा येसुले किन बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुन्थ्यो र? यसो गर्दा उहाँ ईश्‍वरको न्यायदण्ड र धार्मिकताविरुद्ध गइरहनुभएको हुन्थ्यो नि, होइन र? (मत्ति ४:२३, २४) येसु कहिल्यै पनि ईश्‍वरको निर्णय विपरीत चल्नुहुने थिएन। उहाँले यसो भन्‍नुभयो: “म सधैँ उहाँलाई मन पर्ने कामहरू गर्छु” र “बुबाले मलाई दिनुभएको आज्ञा म पालन गर्दै छु।”—युहन्‍ना ८:२९; १४:३१.
बाइबलले स्पष्टै यहोवाले “कहिल्यै अन्याय गर्नुहुन्‍न” भन्छ। (व्यवस्था ३२:४) उदाहरणको लागि, विमानमा यात्रा गरिरहेको एक जनालाई सजाय दिन त्यस विमानको दुर्घटना गराएर सयौँ निर्दोष मानिसको ज्यान गएको उहाँ कहिल्यै चाहनुहुन्‍न। यहोवाको वफादार सेवक अब्राहाम, जो उहाँको नजरमा धर्मी थिए, तिनले उहाँले कहिल्यै “धर्मी मानिसलाई . . . दुष्टसँगसँगै नाश” गर्नुहुन्‍न भनी बताए। तिनले उहाँबाट अन्याय “कहिल्यै हुन सक्दैन” पनि भने। (उत्पत्ति १८:२३, २५) “परमेश्‍वरले कहिल्यै कसैलाई दुःख दिनुहुन्‍न” र “कसैको हानि” गर्नुहुन्‍न भनेर पनि बाइबल बताउँछ।—अय्युब ३४:१०-१२.
बाइबलले दुःखकष्टबारे के सिकाउँछ?
हामीले भोग्ने दुःखकष्ट पापको लागि ईश्‍वरले दिनुभएको सजाय होइन। यो कुरामा येसु विश्‍वस्त हुनुहुन्थ्यो। यसको प्रमाण जन्मैदेखि अन्धा मानिससँगको उहाँ र चेलाहरूको भेट भएको विवरणबाट थाह पाउन सक्छौँ। बाइबल भन्छ: “चेलाहरूले उहाँलाई सोधे: ‘रब्बी, कसले पाप गरेकोले यो मानिस अन्धो जन्मियो, यसले कि यसका आमाबुबाले?’ येसुले जवाफ दिनुभयो: ‘न यस मानिसले पाप गरेकोले न त यसका आमाबुबाले पाप गरेकोले; तर यस मानिसको मामिलामा परमेश्‍वरका कामहरू प्रकट होऊन्‌ भनेर यसो भएको हो।’”—युहन्‍ना ९:१-३.
त्यतिबेलाका मानिसहरूको विचारमा रोगबिमार लाग्नुको कारण पापको सजाय थियो। तर येसुले त्यो मानिस अन्धो हुनुको कारण उसले वा उसको आमाबुबाले पाप गरेकोले होइन भनेर स्पष्ट पार्नुभयो। यो कुरा सुनेर चेलाहरू छक्कै परे होलान्‌। येसुले त्यस मानिसलाई निको पार्नुभयो अनि मानिसहरूको गलत सोचाइलाई पनि सच्याइदिनुभयो। (युहन्‍ना ९:६, ७) आज गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूले पनि ईश्‍वरले गर्दा बिमारी परेको होइन भनी थाह पाउँदा सान्त्वना पाउँछन्‌।
यदि ईश्‍वरले मानिसहरूलाई सजाय दिन रोगबिमारले प्रहार गर्नुभएको थियो भने येसुले किन बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो?
“कुनै दुष्ट कुराद्वारा परमेश्‍वरको परीक्षा लिन सकिँदैन र उहाँ आफैले पनि कुनै दुष्ट कुराद्वारा कसैको परीक्षा लिनुहुन्‍न।” (याकुब १:१३) वास्तवमा सयौँ वर्षदेखि मानिसहरूले भोग्दै आएको रोगबिमार, पीडा र मृत्युजस्ता “दुष्ट कुरा”-को छिट्टै अन्त हुँदै छ।
येसु ख्रिष्टले “बिरामीहरूजति सबैलाई निको पार्नुभयो।” (मत्ति ८:१६) येसुले बिरामीहरूलाई निको पार्नुभएको कुराले ईश्‍वरको राज्यले संसारभरि नै व्यापक रूपमा रोगबिमार निको पार्नेछ भनेर देखाउँछ।
“उहाँले [ईश्‍वरले] तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ र मृत्यु हुनेछैन अनि शोक, रुवाइ वा पीडा पनि फेरि कहिल्यै हुनेछैन। पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्‌।”—प्रकाश २१:३-५.
त्यसोभए मानिसजातिले किन यति धेरै पीडा र दुःखकष्ट भोग्दै छन्‌? मानिसहरूले यस प्रश्‍नबारे सोचेको सयौँ वर्ष भइसक्यो। यदि ईश्‍वर दोषी हुनुहुन्‍न भने को दोषी छ? यस प्रश्‍नको जवाफ अर्को लेखमा पाउनेछौँ।
^ अनु.4हुनत प्राचीनकालमा यहोवाले कुनै-कुनै पापको सजाय दिनुभएको विवरण पाइन्छ। तर अहिलेको समयमा उहाँले मानिसहरूलाई पापको सजाय दिन रोगबिमार वा दुःखकष्ट जस्ता कुराहरू पठाउनुहुन्छ भनेर बाइबल बताउँदैन।
ईश्‍वरको वचन बाइबलले दुःखकष्ट हुनुको तीन कारणबारे बताएको छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने दुःखकष्ट—के ईश्‍वरले दिनुभएको सजाय हो?